Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Tag | Projects
Posted on January 27, 2017 by freeburma
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော်)
လက်ရှိရောင်းချနေ သော ကနောင်၊ ရွှေလင်ဗန်းနှင့် ယုဇနတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာစီမံကိန်း တို့တွင် ထပ်မံရောင်းချရန်အခန်း များပိုနေသေးကြောင်း မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနမှ သတင်း ရရှိသည်။
ရွှေလင်ဗန်းအိမ်ရာတွင် အ ခန်းပေါင်း ၂၄၀ရောင်းချရန်စီစဉ် ထားရာ ဘဏ်မှတစ်ဆင့်လျှောက် ထားသူ ၁၀၁ဦးသာရှိသည်။ ယုဇ နတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတွင် အခန်း ပေါင်း ၅၇၁ခန်းရောင်းရန်စီစဉ် ထားရာ အခန်း ၁၆ခန်းသည် လျှောက်ထားမည့်သူမရှိသေး ကြောင်းနှင့် ကနောင်တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာတွင် အခန်း ၈၀ရောင်းချ ရန်စီစဉ်ထားရာ ၁၀ခန်းပိုနေသေး ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ ထို့ ကြောင့်အဆိုပါအိမ်ရာစီမံကိန်း သုံးခုရှိ အခန်းပေါင်း ၁၆၀ကျော်ပို နေခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘အများစုက မြေညီထပ်ကို လိုချင်တာများတော့ အပေါ်ထပ် တွေကို သိပ်မလျှောက်ကြဘူး။ ဒါ ကြောင့် အခန်းတချို့ပိုနေတာ’’ဟု မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာန မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦး မောင်မောင်လွင်က 7Day Daily အား ပြောသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တွင်ငွေကျပ်သိန်း ၃၀ ပြည့်သောကြောင့် ဘဏ်စာ ရင်း ဖွင့်လှစ်ထားသူများအား အိမ် ရာချေးငွေများ ထုတ်ပေးပြီးအဆို ပါအခန်းများကို ရောင်းချနေခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက်ပထ မဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဘဏ်ချေးငွေ ဖြင့် ရောင်းချသော အိမ်ရာစီမံကိန်းများအနက် တောင်ဒဂုံမြို့ နယ်ရှိ ယုဇနအိမ်ရာစီမံကိန်းကို အများဆုံးလျှောက်ထားဝယ်ယူ ကြကြောင်း ဦးမောင်မောင်လွင် ကပြောသည်။
ပိုနေသော အခန်းများကို ဘဏ်စာရင်းအကောင့်ဖွင့်ထားသူများထဲမှအလှည့်ကျ စီနီယာအလိုက်ထပ်မံ ရောင်းချမည့် အစီအစဉ်များရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရောင်းချရာတွင် ကုမ္ပဏီဝန် ထမ်း၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းနှင့် သာမန်ပြည်သူအငြိမ်းစားများဟူ၍ အုပ်စုအလိုက် ခွဲခြားရောင်းချနေသည်။
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာဝယ်ယူ ခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် ဘဏ်သို့ နှစ်ပတ်အတွင်းလာရောက်ဆက် သွယ်ရန်မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယခင်အစိုးရလက်ထက်က ရန်ကုန်တွင် ရွှေလင်ဗန်း အပိုင်း (၁)နှင့် အပိုင်း(၂)၊ ကျန်စစ်သား၊ ယုဇန၊ ကနောင်တန်ဖိုးနည်းအိမ် ရာစီမံကိန်းငါးခုတည်ဆောက်ခဲ့ သည်။ သို့သော် ရွှေလင်ဗန်းအိမ် ရာစီမံကိန်းမှ အခန်းပေါင်းခြောက် ရာကျော်ကိုသာ ယခင်အစိုးရ လက်ထက်တွင် မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနမှ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ ကြောင်း ဦးမောင်မောင်လွင်က ပြောသည်။
ယခုရောင်းချနေသော အိမ် ရာစီမံကိန်းများမှာ ပြီးခဲ့သည့်အစိုး ရလက်ထက်က စတင်တည် ဆောက်ခဲ့ပြီး ယခုအစိုးရသစ် လက်ထက်ရောက်မှ ပြီးစီးသော ကြောင့် ယခုနှစ်တွင် ရောင်းချနိုင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် အစိုးရလက်ထက်က မဲနှိုက်သည့်စနစ်ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ပြီး ယခုအစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ဘဏ်၌ ငွေစု ထားသူများကိုသာ ဦးစားပေး ရောင်းချသည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံး နေကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မြို့ပြနှင့် အိမ် ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနက တည် ဆောက်ပြီးစီးသမျှ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာစီမံကိန်းများမှ စုစုပေါင်း အခန်းပေါင်း ၂,၀၀၀ကို ကနဦး ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်သည်။
via7Days News http://ift.tt/2k8dGup http://ift.tt/1Vus636
Posted in Projects - စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Projects	| Leaveacomment |
Posted on November 11, 2016 by freeburma
ဧရာဝတီ-မြစ်ဆုံ မြစ်ညာ မြစ်ဝှမ်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ လေ့လာစိစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင် အစီရ
via The Ladies http://ift.tt/2fJMOxe http://ift.tt/1t35IDK
Posted on November 1, 2016 by freeburma
ဓာတ်ပုံ – ငြိမ်းဝေ
ချင်းမိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ။ ။ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်း လုံးဝ ရပ်တန့်ရေးရန် မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ယက်နှင့် မြစ်ဆုံဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်က မြစ်ဆုံကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်၍ တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွင် မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ယက်မှ ပညာရှင်များက စာတမ်းများ ဖတ်ကြားခြင်း၊ ဒေသခံများ၏ စီမံကိန်း ရပ်တန့်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အခက်အခဲ အတွေ့အကြုံများကို စီမံကိန်း ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ရင်ဖွင့် ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ကချင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါနေသူ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ပြောသည်။
“အခမ်းအနားမှာက ဒေသခံတွေက သူတို့အတွေ့အကြုံကို ရင်ဖွင့်ပြောဆိုတယ်။ သူတို့က လုံးဝ သဘောမတူပါဘူး။ ရွှေ့ပြောင်းတဲ့ ကျေးရွာတွေပေါ့။ သူတို့ပြောတဲ့ စကားကတော့ စံပြမဟုတ်တဲ့ စံပြရွာမှာ နေနေရတယ်တဲ့။ သူတို့ကို စီမံကိန်း ဒုက္ခသည်များတဲ့ ဒီနာမည်တွေ သုံးသွားပါတယ်။ အားလုံးကတော့ သူတို့ ဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာကို ဖွင့်ပြောတယ်။ သူတို့နေရာသူတို့ ပြန်ချင်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်”ဒေါက်တာထွန်းလွင်က မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
ကချင်ဒေသအထက်ပိုင်းသာမက ပြည်သူလူထု အားလုံး ကန့်ကွက်၍ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေးအတွက် မြန်မာ အစိမ်းရောင် ကွန်ယက်၏ ၅ ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ သွားရောက်၍ မြစ်ဆုံ ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သူက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်တွင် ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ ဒေသခံများ၊ မြစ်ဆုံဒေသခံများနှင့် သုံးရက်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်တွင် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးထွန်းလွင်က ပြောသည်။
မြစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် မြစ်ဆုံဒေသခံများက ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ကြရန်အတွက် ကဗျာရွတ်ခြင်းများလည်း၊ သီချင်းများဖြင့် ရင်ဖွင့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်က ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ သံယံဇာတနှင့် သဘောဝပတ်ဝန်းကျင် ဝန်ကြီး၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင် မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ယက်မှ အလုပ်အမှုဆောင် ဒေါ်ဒေဝီသန့်စင်နှင့် ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင်တို့က ကချင်ဒေသ အထက်ပိုင်း သာမက ပြည်သူလူထုအားလုံး ကန့်ကွက်ရန်အတွက် ရေကာတာ ပြုလုပ်ရန် သင့်၊ မသင့်၊ သန့်စင်သော လျှပ်စစ်စွမမ်းအင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနာဂတ်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ စသည့် ခေါင်းဆောင်များဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ယက်က ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ၊ မြစ်ညာ၊ မြစ်ဝှမ်းလေ့လာစစ်ရေးကော်မရှင်က သမ္မတထံ အစီရင်ခံစာ မတင်သွင်းမီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကချင်ပြည်ဒေသခံများ၏ သဘောထားကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ကချင်ပြည်နယ်သို့ ၅ ကြိမ်မြောက် သွားရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ၊ မြစ်ညှာ၊ မြစ်ဝှမ်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ လေ့လာစိစစ်၊ သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကလည်း ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလက သုံးရက်ကြာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ယင်းကော်မရှင်သည် လာမည့် နိုဝင်ဘာလတွင် ၁၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ အစီရင်ခံစာ တင်ပြမည် ဖြစ်သည်။
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/2fbHGQt http://ift.tt/1nfHMox
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တန်းမြို့နယ် ဇွဲပါကုန်းတန်းကျေးရွာမှာ ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ အတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကျေးရွာသားတွေကို သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ စည်းရုံးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်သက်သက်မူ က ပြောပါတယ်။
မနေ့ကကျင်းပတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံတည်ဆောက်ခွင့်ပြုဖို့ ရှိမရှိ မေးမြန်းခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ကြောင်း တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ပြန်လည်ဖြေ ကြားခဲ့တယ်လို့ ကျောက်တန်းမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်သက်သက်မူ က ပြောပါတယ်။
"လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော် မနေ့ကသူဖြေတာက အစီအစဉ်မရှိ ဘူးလို့ပဲဖြေတယ်၊ ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေကို အဲ့လောက်ပြောလိုက်ရင်ပဲ ၀မ်းသာနေကြတာ သူတို့က ကြောက်နေကြတာ" လို့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံတည်ဆောက်လိုသူတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လက စတင်ပြီး ဇွဲပါကုန်းတန်း ကျေးရွာမှာ ဒေသ ခံတွေကို စည်းရုံးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရေကန်တူးဖော်ဖို့ ငွေကျပ် ၄၅ သိန်းလှူဒါန်းထားပြီး တံတားတွေတည်ဆောက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ စက်ရုံကရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ် ၂ ရာခိုင်နှုန်းကိုဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း လည်း လာရောက်စည်းရုံးသူတွေက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဒေသခံတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားတဲ့ စာချုပ်မှာ သဘောတူ လက်မှတ်ရေး ထိုးပေးဖို့ ပြောလာတဲ့အပေါ် ဒေသခံတွေက စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက် လွှတ်တော်မှာ မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့တာ လို့ ဒေါ်သက်သက်မူ က ပြောပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2dA6eof http://www.rfa.org
Posted on September 29, 2016 by freeburma
စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel တွင် ပြုလုပ်သည့် “ကျွန်းတထောင် ရေလွှမ်းတော့မည်” မှတ်တမ်း ရုပ်သံ ရှင်းလင်း ပြသပွဲ(ဓာတ်ပုံ – နန်းဆိုင်နွမ်/ဧရာဝတီ)
ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်း တည်ဆောက်မည့် အကြီးမားဆုံးရေကာဖြစ်သည့် မိုင်းတုံ (တာဆန်း) ရေကာတာကြောင့် ကွန်ဟိန်း “ကျွန်းတထောင်မြေ” ၏ သဘာဝ အလှတရား ပျောက်ကွယ် သွားနိုင်သည်ဟု ရှမ်း လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှား သူများက ပြောသည်။
ကွန်ဟိန်းမြို့ အမည်သည် ရှမ်း ဘာသာစကား ဖြစ်ပြီး “ကွန်” ဆိုသည်မှာ ကျွန်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး “ဟိန်း” ဆိုသည်မှာ တထောင် ဟု အဓိပ္ပာယ် ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ဟိန်း ကို ကျွန်းတထောင်မြေ ဟု ခေါ်ဝေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ရေကာတာ တည်ဆောက်မည်ဆိုလျှင် ရှမ်းပြည်၏ တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်သော “ကျွန်းတထောင် ရေလွှမ်းတော့မည်” ဆိုသော မှတ်တမ်း ရုပ်သံနှင့်ပတ်သက်ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel တွင် ရှင်းလင်း ပြသခဲ့ သည်။
အဆိုပါ ရုပ်သံသည် မိနစ် ၃၀ ရှိပြီး ကျွန်းတထောင်မြေ အတွင်းရှိ လှပသည့် ရေတံခွန်များ၊ မြစ်ကြောင်းကို မှီတင်း ပြီး ရှာဖွေ စားသောက်နေကြသည့် ဒေသခံများ အကြောင်း၊ စီမံကိန်းကြောင့် တပ်မတော်များ၏ နယ်မြေစိုးမိုးမှုများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ နှင့် တပ်မတော် ကြား တိုက်ပွဲကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရသည့် ပြည်သူများ၏ ရင်ဖွင့်သံများနှင့် လက်ရှိ စီမံကိန်းကြောင့် စေတီဘုရား ပျက်စီးမှုများ ရှိကြောင်း မှတ်တမ်း တင်ထား သည် ကို ကြည့်ရှုရသည်။
မိုင်းတုံ(တာဆန်း) ရေကာတာ စီမံကိန်း တည်ဆောက်ပါက အဓိက အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်၏ ရှေးဟောင်း အမွေ အနှစ် ဖြစ်သည့် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိ စေတီပုထိုးများကို ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း၊ ရေကာတာကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူ များ ၏ အသက်အန္တရာယ် ကြုံရနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရေကာတာ စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်း စေလိုကြောင်း ရှမ်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အရေး လှုပ်ရှားနေသည့် စိုင်းခေးဆိုင် က ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ရဲ့ ကျွန်းတထောင် မြေက ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ဒေသအဖြစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် သင့်ပါတယ်။ တကယ် လို့ မိုင်းတုံ ရေကာတာကြီးကိုသာ ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ရဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အမွေအနှစ်တွေ အားလုံး ပျောက်ကွယ်သွားမယ်”ဟုလည်း စိုင်းခေးဆိုင် က ဆိုသည်။
မိုင်းတုံရေကာတာ ဆောက်လျှင် ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ကာလိမြို့နယ်၊ မိုင်းပြင်းမြို့နယ်၊ ကျိုင်ထောင်းတို့ ရေလွှမ်းမိုး နိုင် ကြောင်းလည်း စိုင်းခေးဆိုင် က ပြောသည်။
သံလွင်မြစ်ပေါ် တည်ဆောက်ပါက မြစ်ကြောင်း၏ ဂေဟစနစ်ကို အကြီးဆုံးပျက်စီးစေပြီး ရေလွှမ်းမိုးမှု ဒဏ်ကြောင့် မြစ်ကြောင်း တလျောက် နေထိုင်သူများ၏ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကိုလည်း ထိခိုက်မည်ဟုလည်း ကွန်ဟိန်း မြို့ နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် နန်းခင်စော က ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သည့် ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
“ကျမ မဲဆန္ဒနယ် ရွာပေါင်း ၁၃၇ ရွာ၊ လူဦးရေ ၅ သောင်းကျော်က ထိတ်လန့်မှုတွေ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ နေရာ ပြောင်းရွှေ့ရမှုကြောင့် အစဉ်အလာအရ အသိပညာများ ပျောက်ဆုံးပြီး၊ ယဉ်ကျေးမှု များလည်း ပျက်စီး ဆုံးရှုံးရပါ တယ်။ များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေး သူငယ်တွေ ထိခိုက်မှုတွေ ကြုံတွေ့ရမှာပါ”ဟု နန်းခင်စော က ဆို သည်။
သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် ရေကာတာများ တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက လက်ရှိ ဖော်ဆောင်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူ့ဆန္ဒများကို နိုင်ငံတော် အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုမှု နည်းပါးနေ ကြောင်းလည်း နန်းခင်စောက ဆက်ပြောသည်။
“စီမံကိန်း ဆောက်ရင် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး အလှမ်းဝေးစေပါတယ်။ ဆည်တည်ဆောက်မှုကို ပြန်သုံးသပ်သင့် တယ်။ သံလွင်ရေကာတာ လုပ်ရင် နောင်ဆိုရင် ရှမ်းပြည်ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ သံလွင်မရှိရင် ရှမ်းပြည် အလှ ပျောက် သွားမယ်။ No Dam မဟုတ်တော့ဘူး ။ NO EIA/ NO SIA ပါ လှုပ်ရှားရမယ်”ဟု ရှမ်းပြည် ညီညွတ်ရေး ကော်မတီ (CSSU) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စိုင်းလိတ်က ပြောသည်။
သံလွင်မြစ်ပေါ် တည်ဆောက်မည့် ရေကာတာစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှမ်းနိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ ရှမ်းလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ စုပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရှမ်းပြည် ညီညွတ်ရေး ကော်မတီ (CSSU) က သဘောထား ကြေညာချက် ထုတ် ပြန် ကန့်ကွက်သကဲ့သို့ သံလွင်မြစ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး ကွန်ရက်က အစိုးရအား သံလွင်မြစ်ပေါ် တည်ဆောက် မည့် ရေကာတာစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ရေကာတာစီမံကိန်း ရပ်တန့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ၆ ခု တည်ဆောက်ရန် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်း စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ထို စီမံကိန်းများမှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၁၅၀၀၀ ထုတ်လုပ်ရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ၆ ခုသည် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်း၌ အထက် သံလွင် (ကွမ်းလုံ) စီမံကိန်း၊ နောင်ဖ စီမံကိန်း၊ မန်တောင်း စီမံကိန်း၊ မိုင်းတုံ (တာဆန်း) စီမံကိန်းတို့ ဖြစ်ပြီး ကယားပြည်နယ် အတွင်း၌ ရွာသစ် စီမံကိန်း နှင့် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ဟတ်ကြီး စီမံကိန်းတို့ ဖြစ်သည်။
သံလွင်မြစ်ပေါ်ရှိ ရေကာတာမှ ထွက်လာမည့် လျှစ်စစ်ဓာတ်အားကို ထိုင်းနိုင်ငံ သို့ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ တရုတ် နိုင်ငံသို့ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြေင်း သိရသည်။
The post မိုင်းတုံ ရေကာတာကြောင့် “ကျွန်းတထောင်မြေ” သဘာဝ အလှတရား ပျောက်ကွယ်နိုင်ဟု ဆို appeared first on ဧရာဝတီ.
via သတင်း – ဧရာဝတီ http://ift.tt/2cXjLni http://ift.tt/1PXzsvq
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် ညောင်ရွှေမြို့တို့တွင် ဟိုတယ်ဆောက်လု
via The Ladies http://ift.tt/2d5OajA http://ift.tt/1t35IDK
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2cEQopf http://ift.tt/Tf1V41
လျှပ်စစ်မီးများ လင်းနေသော ရန်ကုန်ညဘက်မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ − စိုင်းဇော်)
လာမည့်နှစ်တွင် လျှပ် စစ်ဓာတ်အားမပြတ်တောက်စေ ရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီးအတွင်း ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်းများ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ရန် ကျပ်သန်း တစ်သောင်းခုနစ် ထောင်ကျော် သုံးစွဲမည် ဖြစ် ကြောင်း ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ် အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်းမှ သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါငွေပမာဏကို ဓာတ် အားခွဲရုံများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ထရန်စဖော်မာများနှင့် ကောင်း ကင်ဓာတ်အားလိုင်းများတပ်ဆင် ခြင်း၊ မြေအောက်ဓာတ်အားလိုင်း များတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်း သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံး ပြုမည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယခုနှစ်တွင် ဓာတ်အားခွဲရုံ ရှစ်ရုံနှင့် ထရန်စဖော်မာ ၁၁၁ လုံး၊ အမျိုးအစား မတူသည့် ဓာတ်အားလိုင်းသုံးလိုင်းကို မိုင်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မည်ဟု သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီကစတင်ကာ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ပတ် သက်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ လေးလအတွင်း ထရန်စဖော်မာအလုံးရေ ၁၈၆ လုံး တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ကောင်းကင်ဓာတ် အားလိုင်း သုံးမျိုး သွယ်တန်းခဲ့ သည်။
မြန်မာ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အေဂျင်စီ (JICA) တို့မှ ကျပ်ဘီလီယံ ၁၄ ချေးယူထားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပုံမှန်ဖြန့်ဖြူး ပေးရေးအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ် အားမဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀ ခန့် ထပ်မံလို အပ်နေပြီး အဆိုပါလိုအပ်ချက် များ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေး ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်ပေးရေး ကော်ပို ရေးရှင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ယခုနှစ်အ တွင်း ပြင်ဆင်မည်ဟု ပြီးခဲ့သည့် မေလကုန်က မီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
via7Days News http://ift.tt/2cu16AR http://ift.tt/1Vus636
Posted in Projects - စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ	| Tagged Energy, Feedly, IFTTT, Projects	| Leaveacomment |
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ကြောင့် ရွေ့ပြောင်းခံနေရသည့် ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ အခက်အခဲ အသံများ ထုတ်ဖော်သည့် အခမ်းအနား ကို မနက်ဖြန် စက်တာဘာလ ၉ ရက်နေ့ မြစ်ဆုံ နံဘေးတွင် ပြုလုပ်မည်ဟု သိရပါသည်။
via BURMESE.KACHINNEWS.COM http://ift.tt/2cGyc2m http://ift.tt/1xzLfX3
Posted in Projects, Protests	| Tagged Feedly, IFTTT, Projects, Protests	| Leaveacomment |
Posted in Projects - စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Projects, Protests	| Leaveacomment |
Posted on June 22, 2016 by freeburma
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ထိုင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်မယ့် စီမံကိန်းကြီး ၂ ခုကို ရပ်တန့်ဖို့ ဇွန် ၂၁ ရက်က အစိုးရမဟုတ်တဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း (အန်ဂျီအို)တွေက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုင်းနိုင်ငံကို ဇွန် ၂၃ ရက်ကနေ ၂၅ ရက်အထိ ၃ ရက်ကြာ သွားရောက်ဖို့ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် ခရီးစဉ်အတွင်း နှောင့်နှေ်းနေတဲ့ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်နဲ့ သံလွင်မြစ်ပေါ်မှာ ဆည်တွေ တည်ဆောက်မယ့် စီမံကိန်းတွေကို ထိုင်းအစိုးရက ပြန်အသက်သွင်းဖို့ ကြိုးစားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းတွေကို လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ကြိုးစားနေတာကို ဆိုင်းငံ့ထားဖို့ အန်ဂျီအို ၂၃ ဖွဲ့က တောင်းဆိုတယ်လို့ ထိုင်းအခြေစိုက် ဘန်ကောက်ပိုစ့် သတင်းမှာ ရေးပါတယ်။
ဒေသခံတွေနဲ့ ဆွေနွေးညှိနှိုင်းထားခြင်းမရှိတဲ့ ထားဝယ်စီမံကိန်းဟာ ဒေသခံတွေရဲ့ မြေယာတွေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကို ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ အန်ဂျီအိုတွေက ထောက်ပြပါတယ်။
ဒါအပြင် သံလွင်မြစ်ပေါ်က ဆည်တွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေသလို ရေလွမ်းမိုးမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မှာ ခေတ္တခိုလှုံနေတဲ့ ရှမ်းနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသားတွေ အိမ်ပြန်ဖို့ ဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း အန်ဂျီအိုတွေက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ လုပ်ဆောင်မယ့် စီမံကိန်းတွေဟာ ၂ နိုင်ငံ အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့၊ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဖြစ်စေဖို့၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လူထုတွေကို အသိပေးခွင့်ပြုဖို့၊ ပွင့်လင်းမြင်သာ ယုံကြည်မှုတွေရှိဖို့၊ ဗျူဟာကျ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အကျိုးသက်ရောက်မှု စစ်ဆေးချက်တွေ ပြီးဆုံးတဲ့အထိ စောင့်ဆိုင်းပေးဖို့အတွက် စီမံကိန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ မြန်မာအစိုးရ ခေါင်းဆောင်တဦးကို တိုက်တွန်းတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရေးပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ် ချန်အိုချာနဲ့ တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်သလို စမွတ်စခွန်မှာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင် ရပ်ချဘူရီမှာရှိတဲ့ ထမ်ဟင်ဒုက္ခသည် စခန်းကို သွားရောက်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဒါအပြင် တရားမ၀င် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေးကို ဖြေရှင်းဖို့ ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးနဲ့ သဘောတူညီမှုတခု ရယူဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်နေတယ်လို့ သတင်းက ရေးပါတယ်။
The post ဒေါ်စု ထိုင်းခရီးစဉ်တွင် စီမံကိန်းကြီးများရပ်ဆိုင်းရန် အန်ဂျီအိုအဖွဲ့များ တောင်းဆို appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/28ObDqu http://burmese.dvb.no
Posted in Projects - စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Feedly, IFTTT, Projects	| Leaveacomment |
Posted in Cabinet - အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Feedly, IFTTT, Projects	| Leaveacomment |